Football Khabar » बुन्डेसलिगा : बार्यनको कठिन जितमा लेवान्डोस्कीको २ गोल
बुन्डेसलिगा : बार्यनको कठिन जितमा लेवान्डोस्कीको २ गोल
जर्मन लिग बुन्डेसलिगामा बार्यन म्युनिखले सहज जित निकालेको छ । गत राति भएको २३औं साताको खेलमा बार्यनले आफ्नो घरेलु मैदानमा पाहुना टोल बाडरबर्नलाई ३–२ ले हरायो । बार्यनको जितमा रोवर्ट लेवान्डोस्कीले २ गोल गरे ।
बार्यनले खेलको २५औं मिनेटमा सेर्गी गेनाब्रीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । सो गोलमा टोलिसोले पास गरेका थिए । तर, खेलको ४४औं मिनेटमा पाहुनाट टोली पाडरबर्न खेलमा फर्कियो । डेनिस श्रेबनीले बक्सभित्रबाट उत्कृष्ट कला देखाउँदै सहजै गोल गरेर खेल पहिलो हाफमा १–१ बनाए । गोलकिपरलाई बिट गरेर श्रेबनीले सहजै गोल गरेका थिए ।
तर, दोस्रो हाफमा बार्यनका लागि लेवान्डोस्की नायक बने । ७०औं मिनेटमा उनले गेनाब्रीको असिस्टमा गोल गरेर टिमलाई २–१ को अग्रता दिलाए । बक्सभित्र गेनाब्रीले दिएको क्रस पासमा लेवान्डोस्कीले वान टचमै सुन्दर गोल गरेका थिए । तर, बार्यनको अग्रता धेरैबेर टिकेन । पाडरबर्नका लागि खेलको ७५औं मिनेटमा सेभेन मिकेलले रिबाउन्डमा सहजै गोल गरेर खेल २–२ मा ल्याएका थिए ।
तर, खेलको ८८औं मिनेटमा लेवान्डोस्कीले बार्यनका लागि विजयी गोल हाने । सो गोलमा गेनाब्रीले नै असिस्ट गरेका थिए । अन्तिम समयमा गरेको गोलसँगै खेल बार्यनले ३–२ ले जित्यो ।
यो जितसँगै बार्यनले अब २३ खेलबाट ४९ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । उसले एक खेल कम खेलेको दोेस्रो स्थानको लेइपजिगलाई ४ अंकले पछि पारेको छ ।
यस खेलमा गरेको २ गोलसँगै लेवान्डोस्कीले जारी सिजन घरेलु लिगमा गरेको कूल गोल संख्या २५ पुगेको छ । उनले २३ खेलबाट २५ गोल गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति १० फाल्गुन २०७६, शनिबार ०८:१७
कोरोना संक्रमित रोनाल्डोको अवस्थाबारे प्रशिक्षक पिर्लोद्वारा जानकारी
लेस्टरलाई उसकै घरमा हराउँदै एस्टोन भिल्ला प्रिमियर लिगको दोस्रो स्थानमा
बेलको डेब्यु खेलमा टोटनह्यामको निराशाजनक बराबरी : वेस्ट ह्यामको रोमाञ्चक कमब्याक !
रियल मड्रिड हार्दा जिदानले रोनाल्डोलाई यसरी सम्झिए
के सिटीले मेस्सीलाई जनवरी विन्डोमै भित्र्याउँदै छ ?
लिभरपुललाई ठूलो झट्का : भान डाइकले सिंगै सिजन गुमाउन सक्ने !
आज टोटनह्याम र वेस्ट ह्याम भिड्दै : बेलले डेब्यु गर्ने सम्भावना कति ?
मेस्सीलाई पछि पार्दै ला लिगामा स्वारेजको नयाँ रेकर्ड